Chii chinonzi Omni-Chiteshi? Zviri Kukanganisa Sei Kutengesa Mwaka Wezororo uyu?
China, December 17, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Makore matanhatu apfuura, dambudziko rakakura rekushambadzira pamhepo yaive kugona kubatanidza, kuenzanisa, uyezve kudzora mameseji mune yega yega chiteshi. Sezvo matsva matsva akabuda uye achiwedzera mukuzivikanwa, vashambadziri vakawedzera mamwe mabheji uye mamwe mabhuru kune yavo yekugadzira purogiramu. Mhedzisiro yacho (iyo ichiri yakajairika), yaive murwi unotyisa wezviziviso uye mameseji ekutengesa akaisa pasi pehuro hwega hwega. Kudzokera shure kunoenderera mberi - nevatengi vakashatiriswa vasingazvinyore uye vachihwanda kumakambani ivo
Ramangwana Rakajeka reRetail
Chipiri, April 1, 2014 Chipiri, April 1, 2014 Kelsey Washington
Nepo mizhinji minda yakaona kudhira kwakakura mumikana yebasa nekufambira mberi muhunyanzvi, mikana yemabasa yekutengesa parizvino iri kuwedzera uye iri kutsvaga kuita sarudzo yakachengeteka yeramangwana. Imwe chete mumabasa mana muUnited States iri muindasitiri yekutengesa, asi iyi indasitiri inovhara zvinopfuura kungotengesa chete. Muchokwadi, pamusoro pe40% yezvinzvimbo mune zvekutengesa mabasa kunze kwekutengesa. Iwo epamusoro mashanu achikwira mabasa